Ndụmọdụ anọ maka ịgwọ afọ ntachi na ụmụaka | Bezzia
Ndụmọdụ anọ maka ịgwọ afọ ntachi na ụmụaka
Maria Jose Roldan | 09/04/2021 22:00 | Maka nwa gị
Afọ ntachi bụ nsogbu na-agbari nri nke nri ụmụaka. Cheta na eriri afọ gị ka na-etolite na ọ bụ ya mere na site n'oge ruo n'oge ị nwere ụdị nsogbu a nke na ị gaghị ejedebe nri dị iche iche sitere na nri nke ọma. Ihe nkịtị bụ na afọ ntachi a nwere ike idozi n'enweghị ọtụtụ nsogbu wee pụọ dị ka ọ bịara.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na afọ ntachi na-adịgide oge, ọ dị mkpa ịhụ dọkịta iji chọpụta ma ị na-arịa ụdị ọrịa ọ bụla. Mgbe ahụ, anyị na-atụ aro usoro ọgwụgwọ ma ọ bụ ndụmọdụ nwere ike inyere obere aka idozi nsogbu nri ya.
1 Dịkwuo gị oriri eriri
2 Na-a aụ nnukwu mmiri
3 Mee egwuregwu
4 Oriri ihe oriri nke mmiri ara ehi
Dịkwuo gị oriri eriri
Faiba bụ isi ma dịkwa mkpa ma a bịa n’igbochi nwatakịrị ahụhụ site na ntachi afọ. Eriri enweghị ike ịdị na nri nwata ma na-eri nri mgbe niile. Ọ dị na mkpụrụ osisi dị ka apụl ma ọ bụ kiwi, na akwụkwọ nri ma ọ bụ ọka. Dị ka ọ dị, inwe nri n'ụba na fiber na-enyere nsogbu afọ ntachi dị iche iche aka ịkwụsị.
Na-a aụ nnukwu mmiri
Ihe ọzọ dị mkpa mgbe a bịara igbochi nwatakịrị ahụ ka ọ ghara ịta ahụhụ bụ ị toụ mmiri ụbọchị niile. Ọ dị ezigbo mkpa na nwatakịrị ahụ na-enweta mmiri zuru oke n'oge niile ma ghara iweta enweghi mmiri mmiri. Iri mmiri na-enyere stool aka ka ọ dị nro ma nwee ike ịpụ n'èzí n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ihe ọ drinkụ drinkụ a tụrụ aro kwesịrị ịbụ mmiri, anaghị atụ aro ị drinksụ ihe ọ sugụ sugụ ma ọ bụ ihe ọ juụ juụ nwere shuga ebe ọ bụ na ha anaghị atụnye ihe ọ bụla dị mma na ahụ.
Imega ahụ mgbe nile na-egbochi afọ ntachi. Mmega ahụ na - enyere eriri afọ aka ịgbadata na eriri afọ na enweghị nsogbu ọ bụla na ịchụpụ stool ahụ n'ụzọ na-eju afọ. Na mgbakwunye na nke a, ịme egwuregwu dị mkpa ka nwatakịrị ahụ nwee obi ụtọ banyere onwe ya ma zere nsogbu nke mgbakwunye kilo.
Oriri ihe oriri nke mmiri ara ehi
Otu n'ime ihe na-akpata afọ ntachi na ụmụaka nwere ike ịbụ n'ihi enweghị probiotics n'ime usoro digestive. Nje bacteria ndị a dị na nri gbara ụka ma nyere aka ịmịpụta nri dị iche iche dị n’ime tract digestive.
N'ozuzu, A na-edozi afọ ntachi na ụmụaka site na isoro usoro a ma ọ bụ usoro okike. Otú ọ dị, ọ nwere ike ime na nsogbu ahụ na-adịgide n'agbanyeghị ịgbaso ndụmọdụ dị otú ahụ. Ọ bụrụ na nke a mee, ndị nne na nna kwesịrị ịgakwuru dọkịta ka ha chọpụta ihe kpatara afọ ntachi na-aga n'ihu ma ọ bụ na-adịgide, sitekwa ebe ahụ, mee ihe n'ụzọ kachasị mma. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, nwatakịrị ahụ nwere ike ịnwe ụfọdụ ụdị ọrịa na-egbochi ya ịnweta eriri afọ kwesịrị ekwesị. A na-edozi nsogbu nsogbu a site na inye ụfọdụ ọgwụ na-enyere usoro nri aka ka ọ dị mma. Ma ọ bụghị ya, obere ntakịrị nwere ike inwe afọ ntachi na-aga n'ihu yana ihe ọjọọ niile nke a gụnyere na ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Maka nwa gị » Ndụmọdụ anọ maka ịgwọ afọ ntachi na ụmụaka
Anyị na-agba ajụjụ efu efu, ụlọ ahịa gị n'ịntanetị maka ndụ na-adigide
5 osisi n'ime ụlọ dị ogologo iji chọọ nkuku ụlọ gị mma